Malunga nathi -I-Guangzhou Naiwei Robot Technology Co., Ltd.
I-Guangzhou Naiwei Robot Technology Co., Ltd., esekwe ngo-Februwari 18, 2020, eyandulelayo yayinguNaiwei (Dongguan) Robot Technology Co.
Umzi mveliso wesibini wesebe
Inkampani ityalwe ngokudibeneyo kwaye yasekwa liSebe lezeNzululwazi nobuChwepheshe bePhondo laseGuangdong, iSayensi kunye neTekhnoloji Bureau kunye noRhulumente weSithili saseGuangzhou Baiyun. Sineqela elomeleleyo le-R & D, i-1 Ph.D, iinjineli ezi-2 zikazwelonke eziphezulu, iinkosi ezi-5, kunye nabasebenzi bezobunjineli abamalunga ne-50, abagubungela uluhlu lweelaser, oomatshini, i-elektroniki, umbane, i-hydraulic, isoftware, i-R & D yetekhnoloji ebonakalayo kunye nesicelo umanyaniso.
Injongo yethu ephambili kukuvelisa isantya esiphezulu kumatshini wokugquma ukuhlangabezana neemfuno ezingxamisekileyo zentengiso yasekhaya naphesheya. Ngophuhliso olukhawulezayo, ngoku sinabasebenzi abangaphezu kwama-600. Indawo yesityalo ingaphezulu kwe-16,000 yeemitha zesikwere.
Ime kwiPaki yezeNzululwazi kunye neTekhnoloji yeBaiyun, sigxile kwizixhobo ezikrelekrele, kubandakanya amalunga ahlanganisiweyo, izixhobo ze-ultrasonic, umatshini wesigqubuthelo kunye nezixhobo ezinxulumene noko, iirobhothi ezihlanganisiweyo ezininzi, i-3D laser ukusika umatshini, iirobhothi ezikhethekileyo nezingaqhelekanga, iirobhothi zokusebenzisana.
Zonke iimveliso zethu ziveliswa ngokwemigangatho ye-CE, CCC, ISO 9001, kwaye ihlala igcina ukuphucula imigangatho yokuhlangabezana neemfuno zabathengi. Samisa iqela elinye lenkonzo, ukusombulula ngokukhawuleza nangokufanelekileyo zonke iintlobo zemibuzo kunye neengxaki ezivela kubaxhasi.
Iimveliso zethu zithembekile ngabathengi abavela kwihlabathi liphela, ukuphuma kwenyanga kufikelela kwiiseti ezili-1000. Isantya esiphezulu sokurhuqa umatshini wemaski yemoto enye, ukusebenza okuzinzileyo, amaxabiso okhuphiswano, anconywa kakhulu ngabathengi bethu.